Kukhona uhlobo lwendiza, indlela yokulenga i-arc kanye nohlobo olukhethekile lokumodela: inetha lodonga lwamakhethini ensimbi libonakala obala, livulekile, lilondoloza isikhala, ukuhlanganisa okulula nokulula. Inemisebenzi eminingi yokusetshenziswa kanye nemiphumela eminingi yokuhlobisa kunezinye izinto, futhi ihambisana kakhulu nezidingo zokuvikelwa kwemvelo nokuphepha komlilo.
Izici ze-glass sandwich mesh yokuhlobisa
1. I-mesh yensimbi yokuhlobisa ingilazi ayishi, inamandla aphezulu futhi iqinile, futhi umphumela wokuhlobisa ucacile.
2. Ingavikela kahle izakhiwo zokwakha.
3. Ungakha ubuciko obungenamkhawulo nokuzijabulisa kobuciko bobuhle kunoma iyiphi indawo efana ne-architectural landscape, indawo yasendlini, i-facade, uphahla, umhlobiso wangemuva, ukwahlukanisa, ukufiphaza kodonga lwamakhethini, njll.
4. Umphumela ohloniphekile, ophanayo, omuhle wezinhlangothi ezintathu, ukhanga kakhulu ngaphansi kokukhanya.
5. Ukufakwa kulula futhi kuyashesha
6. Imeshi yokuhlobisa yensimbi yenziwe ngensimbi engagqwali 304 316 316L, enokumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokugqwala, akulula ukugqwala, kunhle futhi okusezingeni eliphezulu.
7. Imeshi iyunifomu, indawo enezikhala iyisicaba, futhi inetha lensimbi linemibala ehlukahlukene. Kungenziwa egcizelele ngokukhululekile futhi nezimo ngokuvumelana nezidingo
8. I-mesh surface yensimbi kulula ukuyinakekela, kulula ukuyihlanza, umbala ogqamile, ukubukeka okuyingqayizivele, okuhloniphekile nokuhle.
Okwedlule: Ipuleti le-aluminium elinezimbobo lokuhlobisa odongeni lwamakhethini
Olandelayo: Insimbi yokuhlobisa indandatho yezikhali zempi yeketanga lokuvikela
Ukuhlobisa / ukwahlukanisa / kwe-Aluminium alloy chai...
Ukucaciswa kwekhethini lensimbi yensimbi Igama lomkhiqizo Indawo yokudlela ehlukanisayo enezikhala zensimbi Umbala Osagolide, ophuzi, omhlophe, wethusi, ompunga, Usayizi Wesiliva Ubude obukhulu amamitha ayi-10, ububanzi obukhulu ngamamitha angama-30. I-Material Stainless Stee l/ I-Iron wire diameter 2 Imbobo 4*36 Ukwelashwa okungaphezulu Upende wokubhaka / i-titanium plating Isilinganiso sokuvula 50% Indawo yokusebenza Amahhotela, izitolo ezinkulu, imihlobiso yasekhaya, amagumbi okuhlangana, amahholo omhlangano kanye ...
Insimbi engagqwali yangaphakathi ye-decorati yezakhiwo...
Ukwethulwa kwe-crimped nokwelukiweyo komhlobiso we-architectural mesh Sinezinhlobonhlobo zezitayela zokuluka nosayizi bezintambo ukuhlangabezana nezikhuthazo ezihlukene zokuhlobisa. I-Architectural weaving mesh isetshenziswa kabanzi ngaphakathi nangaphandle kwezakhiwo. Ayigcini nje ngokuba nezici eziphakeme kakhulu kunezici zokuqala zezakhiwo, kodwa futhi nokubukeka okuhle, kulula ukudonsa ukunaka kwabantu, bayanda abaklami bokuhlobisa bezakhiwo. Imiklamo yangokwezifiso kanye ne...
I-Decoration wire mesh ye-Metal partition archite...
Ukwethulwa kwemeshi yokuhlobisa yensimbi Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe emkhakheni wokuhlobisa izakhiwo kanye nokuvela okuqhubekayo kwezinto zokwakha, inethiwekhi yokuhlobisa insimbi yokwakha, njengommeleli wezinto ezintsha zokuvikela imvelo embonini, idonsele ukunakwa okukhulu embonini. Imikhiqizo iyavuthwa kancane kancane, idume futhi isetshenziswe kumaphrojekthi wokuhlobisa izakhiwo eziyingqopha-mlando, futhi kancane kancane iqhubekela phambili emhlabeni jikelele...
I-engeli yohlaka Uhlelo lokuxhuma lohlaka lwe-Angular luklanyelwe ukuhlinzeka ngokufakwa kwamagridi aguquguqukayo noma aqinile ezinhlelweni zamaphaneli ezingabizi kakhulu Izinhlelo ziyadingeka. Imeshi ishiselwe ngamachashazi ngaphakathi noma ngaphakathi kwenetha kusetshenziswa i-engeli yensimbi engagqwali eyakheke njengohlaka lwesakhiwo, ishiya imingcele; Noma ingashiselwa ngaphandle kohlaka ukuze kufihlwe i-engeli. Ingelosi yensimbi ngokwayo ayikwazi ukuqedwa; Izindawo eziveziwe nazo zingapholishwa futhi zibe nepholi...
Insimbi yokuhlobisa indandatho inezikhala Ukuvikela ukuphepha ch...
Ukwethulwa kwe-mesh indandatho yensimbi Kunezinhlobo ezimbili ze-chain link mesh: I-ring mesh eshiselwe kanye ne-non welded ring mesh. I-welded ring mesh ifanelekela amagilavu ​​alwa nokusika, indwangu yokusika isigqoko nesigqoko. Ezinye izindandatho zempahla ekhethekile zisetshenziswa emkhakheni wezempi futhi zinemisebenzi yokuvikela izinhlamvu kanye nokuvikela. I-solderless ring mesh isetshenziselwa amakhethini osilingi, amakhethini nezihlukanisi zamakamelo, ngoba i-solderless ring mesh ishibhile kune-welded ring mesh, kodwa iqine ngokwanele kuma-curtai...
Ipuleti le-aluminium elinezimbobo le-curtain wall deco...
Ukucaciswa kwepuleti le-aluminium elinezimbobo Ugqinsi lwepuleti le-aluminium elinezimbobo lodonga lwamakhethini lingu-1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm no-4.0mm. Usayizi ojwayelekile wepuleti ye-aluminium ene-perforated yi-1000 * 20001200 * 2400, engenziwa ngokwezifiso. Intengo yeyunithi ethile yepuleti le-aluminium enembobo idinga ukunqunywa ngokuya ngogqinsi lwepuleti le-aluminium elinembobo kanye nobunzima bokucubungula. Ngokuvamile, ikhotheshini yenziwa ngemva kokuba ikhasimende...